Uyifumene Injongo Yobomi | Incwadi Yonyaka Ka-2015
IBALI LOBOMI UJosé wemka emaphandleni eseyinkwenkwana waya kukhangela ubomi obubhetele edolophini. Wafika apho wafunda inyaniso, yaye kangangeminyaka, ebebeka uBukumkani bukaThixo kwindawo yokuqala ebomini bakhe.
XA WAYENEMINYAKA eyi-11, uJosé wafudukela eSanto Domingo. Ukuze abe nemali, wayepolisha izihlangu, ethengisa amaorenji ne-ice cream. Xa wayengumfana, wayedume ngokukhuthala. Kwiminyaka kamva, umkhuluwa wakhe owayeliNgqina likaYehova, wamcela ukuba agcine umzi wakhe. Phezu kwetafile, uJosé wabona incwadi ethi Unokuphila Ngonaphakade KwiParadisi Esemhlabeni, waza wayifunda ubusuku bonke. Waqonda ukuba uyifumene injongo yobomi.
Kwimpelaveki elandelayo, uJosé waya kwiHolo yoBukumkani ekufutshane, wafika wathi uliNgqina likaYehova. Waxelela abazalwana ukuba ufunde ukuba ufanele aye ezintlanganisweni futhi ashumayele iindaba ezilungileyo. Wabaxelela nokuba kwincwadi Unokuphila ufunde izinto ezimele zingenziwa ngamaKristu, waza wabaqinisekisa ukuba yena akenzi nanye kwezo. Kwiintsuku eziyi-15 emva koko, uJosé waba ngumvakalisi. Wabhaptizwa kwiinyanga ezintandathu ezalandelayo, eneminyaka eyi-21.
Ngenxa yokuba ixesha lomsebenzi kaJosé lalingqubana neleentlanganiso, wawuyeka loo msebenzi, waqeshwa kwindawo eyayimhlawula imali encinane kakhulu kunaleyo wayeyifumana. Ngoku uyakwazi ukuya ezintlanganisweni nokuba nguvulindlela othe ngxi. Kamva watshata waza wanabantwana ababini abangamakhwenkwe. Ngenxa yoko, kwafuneka ayeke ukuba nguvulindlela.
UJosé wazimisela ukubafundisa inyaniso beseziintsana oonyana bakhe. Ngoko xa umkakhe uJosefina wayeneenyanga ezintathu ekhulelwe izibulo labo uNoé, uJosé wayelifundela Incwadi Yam Yamabali EBhayibhile, enethemba lokuba luyamva. Wathi ezalwa uNoé, wabe uJosé sele emfundele yonke loo ncwadi. Wenjenjalo nakunyana wabo wesibini, uNeftalí.
Ekuhambeni kwexesha, uJosé waba ngumphathi welinye ishishini elalimamkelisa imali eyodlula lee leyo wayeyamkela apho wayesebenza khona. Noko ke, ngo-2008, xa unyana wakhe omncinane wayeneminyaka eyi-10, eyomdala iyi-13, wayeka ukuba ngumphathi waza waphinda wanguvulindlela othe ngxi, ngoku ekunye nomfazi nabantwana bakhe. Ekubeni umrholo wakhe wawehle ngendlela ephawulekayo, kwafuneka babambisane ekugcineni iindleko ziphantsi. Xa bebonke, baqhuba izifundo ezimalunga neziyi-30 nyanga nganye. UYesu usiqinisekisa ukuba, xa sibeka uBukumkani kuqala, uYehova uya kusisikelela. (Mat. 6:33) UJosé nentsapho yakhe baye basithemba eso siqinisekiso baza bazibonela ngawabo ukuba uYehova uyayenza into ayithethileyo.